ChimeraOS: GNU / Linux Distro dị mma maka egwuregwu kọmputa na Steam | Site na Linux
Linux Post Wụnye | 24/08/2021 06:00 | Nkesa, Noticias
.Fọdụ Ndị na -egwu egwuregwu na kọmputa ha na -arọkarị nrọ nke a otu ikpo okwu nke na -enye ha ohere igwu egwuregwu ọgbara ọhụrụ ha ma ọ bụ egwuregwu ochie. N'ezie, ụzọ ahụ adịghị mfe. Steam ya Sistemụ arụmọrụ SteamOS nke na -erubeghị ịbịarute na ịga nke ọma, opekata mpe, ọ gosila ụzọ iji nwee ike igwu ụdị egwuregwu ọhụrụ na nke ochie niile gbasara GNU / Linux. Agbanyeghị, taa anyị ga -ekwu maka ya "ChimeraOS".
Gịnị kpatara ChimeraOS? Mba n'ihi nke a GNU / Linux distro dabeere na Arch nwere Steam agbakwunyere, na -enye a ụzọ ọzọ dị mma ka ọtụtụ ndị egwuregwu ga -enyocha ya ka ha hụ ole ha ga -ahụ ka nrọ ha mezuru.
Dịkwa ka ọ dị na mbụ, tupu ịbanye na GNU / Linux Distro «ChimeraOS», anyị ga -alaghachi n'aka, ihe anyị bara uru Ndepụta GNU / Linux Distros dị mma maka igwu egwu, nke anyị biputere na post metụtara anyị gara aga akpọrọ: «Tụgharịa GNU / Linux gị ka ọ bụrụ àgwà Distro Gamer«. Emepụtara nkesa ndị a na ebumnuche ịnye ahụmịhe egwuregwu kacha mma. N'etiti ndị a bụ ndị a:
Cheta na: Onye ọ bụla dịgasị iche na uru na arụmọrụ ya, yabụ ịkwado mmadụ ga -adabere nke ukwuu na ụtọ nke onye ọ bụla. Otu ezigbo mma a kwụsịtụrụla bụ Kpọọ Linux. Aha pụrụ iche nwere Lakka n'ihi na ọ bụ ezigbo Distro iji wụnye na ụdị microcomputers Raspberry PI, dị ka a tụlere na a edemede gara aga na DesdeLinux.
1 ChimeraOS: GNU / Linux + Nnukwu Foto Steam
1.1 Kedu ihe bụ ChimeraOS?
ChimeraOS: GNU / Linux + Nnukwu Foto Steam
Kedu ihe bụ ChimeraOS?
Dị ka Onye Mmepụta ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ya dị ka ndị a:
"Sistemụ arụmọrụ maka egwuregwu kọmputa dabere na Steam Big Picture. Nke ahụ bụ, Sistemụ arụmọrụ na -enye ahụmịhe egwuregwu kọmputa na igbe. Ebe ọ bụ, mgbe etinyere ya, ọ na -amalite ozugbo na Steam Big Picture, si otú a na -enye onye ọ bụla ohere ịmalite igwu egwuregwu kachasị amasị ha, nke ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ nke ochie, nke Steam kwadoro."
Na mgbakwunye, gbakwunye ihe ndị a na ya:
"GamerOS nwere atụmatụ nke SteamOS nwere ike ọ gaghị enwe ike imepụtaghachi, n'ihi enweghị ike nke abụghị teknụzụ, mana nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ na-enyekwa onye ọ bụla ohere ịnụ ụtọ ahụmịhe egwuregwu njikwa na-akwụghị ụgwọ, yana mgbakwunye ọ bụla ọzọ ị nwere ike inwe. GamerOS ga -enyere gị aka ịnụ ụtọ egwuregwu kachasị amasị gị na kọmpụta gị, dịka o mere m."
N'etiti gị pụtara ìhè atụmatụ Anyị nwere ike ịkọwa ihe ndị a:
Mfe ịwụnye: Na -enye gị ohere ịbanye n'ime sistemụ arụmọrụ ọhụrụ ka igwu egwu n'ime nkeji nkeji
dabere na ngwa siri ike nke na -eji ngwa weebụ agbakwunyere iji wụnye na jikwaa egwuregwu na ngwaọrụ ọ bụla.
Tinye nke kacha nta: Na -enye naanị ihe achọrọ igwu egwu na ọ nweghị ihe ọzọ. Yabụ, ọ dịla njikere iji wee nwee ike malite igwu egwu ozugbo na -enweghị mkpa ịhazi egwuregwu dakọtara.
Na -emelite oge niile: Na -agụnye mmelite oge niile yana ndị ọkwọ ụgbọala kacha ọhụrụ na ngwanrọ agbakwunyere. Na mgbakwunye, mmelite ndị a na -abịa na akpaghị aka, na -agbakwa n'okirikiri na -enweghị ịkwụsị egwuregwu ahụ.
Ndakọrịta dị mma na ndị na -ahụ maka egwuregwu: Ekele maka interface ya dakọtara na njikwa, nke na -enye gị ohere iji njikwa ọ bụla. Ọ na -enye ndakọrịta dị mma na Xbox, PlayStation na ndị na -ahụ maka Steam, n'etiti ndị ọzọ, iji nwee ike igwu egwuregwu ọ bụla n'ụzọ dị mfe, ma ha sitere na Steam, Storelọ Ahịa Epic, GOG na ọtụtụ nyiwe njikwa ndị ọzọ.
para ozi ndị ọzọ emelitere banyere "ChimeraOS" ị nwere ike ịga leta gị gọọmentị saịtị na GitHub, ọkachasị nke ya Wiki / Ajụjụ ebe ha na -akọwa ọtụtụ ihe gbasara mbido ya na ọrụ ya. Ebe, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nke ahụ ozugbo egwuregwu nwere asambodo ka a kpọọ ya n'enweghị nsogbu n'ime ya, enwere ike inyocha ihe ndị a ozugbo njikọ.
Na nkenke, "ChimeraOS" Ọ bụ dịka ị nwere ike ịhụ na nke mbụ, nnukwu ihe ọzọ Sistemụ nrụọrụ Steamakpọ "Ngwa Steam" nke ahụ ka na -ejighị ike rute na tebụl nke kọmpụta anyị. Mgbe ahụ, nhọrọ ọzọ na -atọ ụtọ maka ndị ọzọ GNU / Linux Distros dabara maka ndị egwuregwu dị elu nke chọrọ nrụnye na -agwụ ike ma sie ike, nhazi na njikarịcha nke ngwa uzuoku ka ha nwee ike igwu egwuregwu hip ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » ChimeraOS: GNU / Linux Distro dị mma maka egwuregwu kọmputa na Steam
Ezigbo akụkọ. Anyị ga -anwale sistemụ arụmọrụ a…. Abụkarị m onye ofufe Fedora, mana ọtụtụ nhọrọ ka mma
Ekele m, Paul. Daalụ maka nkọwa gị na ee, nke kachasị mma bụ ịnwale ma hụ ka o si arụ ọrụ na kọmputa.
AutoKey: Ngwa ọrụ akpaaka ọrụ bara uru maka GNU / Linux
Ala ọma jijiji: Otu esi eji QuakeSpasm egwu FPS Quake1 na GNU / Linux?